ဟင်းပွဲ ၃၀ ကျော် နဲ့ ၆၀၀၀ တန် Thai Taste Buffet ဂျင်း၊ မဂျင်းအနေအထား
15 Jun 2018 . 4:26 PM
Thai Taste ဆိုတာက ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်တွေထဲမှာ နာမည်တစ်ခုရထားပြီးသားဖြစ်သလို ခုလည်း သုဝဏ္ဏဆိုင်အပြင် ပြည်သူ့ရင်ပြင် Happy Zone ထဲမှာပါ ဆိုင်ခွဲတစ်ဆိုင် ထပ်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုပဲ။
ဒီအထိက မထူးဆန်းသေးပေမယ့် ခု နေ့လည်စာ ဟင်းပွဲ ၃၀ နဲ့ ၂ နာရီစာဘူဖေးထမင်းဟင်း အ၀စားကို ၆၀၀၀ ကျပ်၊ ညစာဆို ၉၀၀၀ ကျပ်ဆိုပြီး တန်တန်ကြီး ခင်းကျင်းနေတယ်ဆိုတော့ ထိုင်းစာရော၊ ထမင်းဟင်းဝဝစားချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ အခြေအနေ အနေအထားဘာညာ တန်၊ မတန်၊ ဂျင်း၊ မဂျင်း သိချင်နေတဲ့သူတွေအတွက် အခရာကနေ သွားရောက် စားသောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ….
မှတ်မိကြမလားမသိဘူး။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းမုန့်ဈေးတန်းတို့ ကန်တင်းတို့က စားသောက်ခန်းမကြီးတွေမှာ ထမင်းစားရသလိုပဲ။ ဆိုင်က အခန်းကျယ်ကြီးကို စားပွဲခုံတွေနဲ့ ကျန်တာ ဘာမှမပြင်ဆင်ရသေးတာလား၊ မပြင်ထားတာလားတော့ မသေချာပါဘူး။
ခုမှဖွင့်ကာစဆိုတော့ ဆိုင်းဘုတ်တောင် ဒီနေ့မှစတပ်နေကြတာ မြင်ခဲ့ရတယ်။ ထောင့်စွန်းမှာ ဗန်းကြီးတွေနဲ့ ဟင်းပွဲတွေ တန်းစီထားတယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။ သန့်ရှင်းမှုကတော့ စိတ်ချရပါတယ်။
ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတယ်။ ဝန်ထမ်းလေးတွေက သေချာရှင်းပြတယ်။ ဘေးက လိုတာလိုက်သယ်ပေးတယ်။ သဘောကျစရာပါပဲ။
ကြက်သား ချိုချဉ်၊ ချဉ်စပ်၊ မျှစ်ချဉ် အပါအဝင် ကြက် ၄,၅ မျိုး၊ ငါး ချိုချဉ်၊ ချဉ်စပ်အပါအဝင် ၃,၄ မျိုး၊ ကင်းမွန်အုန်းနို့၊ ကင်းမွန်ကြော်၊ ပုစွန်ထုပ်ချက် တွေက တစ်ပိုင်း။
တုန်ယမ်းဟင်းချို၊ ဝက်ချဉ်စပ်၊ ကြာဆံကြော်၊ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ဖက်ထိုင်းကြော်၊ အသီးအရွက်၊ သီးစုံကြော်တွေ၊ သဘောင်္သီးထောင်းတွေနဲ့ မာလာရှမ်းကော အဝစားလည်းပါတယ်။
ဖက်ထုပ်ကြော်၊ တန်ပူရာကြော်၊ ကော်ပြန့်ကြော်၊ အအေး၊ ရေသန့်၊ ဖရဲသီး၊ အုန်းနို့သာကူ အဲ့လောက်ထိ စုစုပေါင်း အမျိုး ၃၀ ရတယ်။ တုန်ယမ်းက ပုစွန်ထုပ်တွေနဲ့ ချက်ထားတာ အရသာတော့ပေါ့တယ်။ ပုစွန်ချက်ဟင်းပွဲကတော့ ပွဲအလိုက်ချပေးပါတယ်။
ဆော့စ် ၄ မျိုးလောက်ရှိတယ်။ ငါးပိချက်၊ တို့စရာလည်း ရှိတယ်။ စုံလားမေးရင် အရွက်နဲ့ ကြက်သားများတယ်။ ထမင်းကို ဟင်းနဲ့အဝစားတတ်တဲ့သူတွေ၊ ထိုင်းစာကြိုက်တဲ့သူတွေ၊ နေ့လည်စာဗိုက်အတင်းအကား စားတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတန်မယ်ထင်ရတာပါပဲ။
အဆင်မပြေတာကတော့ ပူပူနွေးနွေးလေး အောက်ကမီးအပူမပေးထားတာရယ်၊ တချို့ဟင်းပွဲတွေကအရသာသိပ်မပြေသေးတာရယ်၊ အရွက်များတာရယ်လောက်တော့ ရှိတယ်။
မာလာရှမ်းကောအရသာလေးတော့ မဆိုးဘူး ပြောရမယ်။ တော်တော် အစပ်အဟပ်တည့်တယ် ခံစားရတယ်။ ဒီဆိုင်မှာ အစားများတဲ့ထဲပါတယ်တဲ့။ အသားလုံးတွေ၊ ခေါက်ဆွဲတွေမပါဘဲ အသားနဲ့ပဲ ချက်ထားတာပေမယ့် အရသာရှိတာတွေ့ရတယ်။ မာလာရှမ်းကောကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဒီမှာ ၂နာရီစာ အဝစားရုံနဲ့တင် တန်ပြီထင်တာပဲ။
ပုစွန်ထုပ်တွေနဲ့ အသား၊ ငါးတွေပါတာပဲ အဆင်ပြေတယ်လို့ ခံစားရပါပြီ။ ကဏန်းကတော့ ညနေ ၉၀၀၀ တန် ဘူဖေးစနစ်မှာမှပါတာပါတဲ့။
နေ့လည်ခင်းစားချိန်ဆို ၁၀:၀၀ ကနေ ၃:၃၀ အထိ ၆၀၀၀ ကျပ်ကွက်တိနဲ့ ညနေ ၄ နာရီကနေ ည ၁၀:၃၀ ထိကိုတော့ ၉၀၀၀ ကျပ်ကျမှာပါတဲ့။
လိပ်စာက မြေနီကုန်း၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်၊ ဓမ္မစေတီလမ်းအပေါက်၊ စမ်းချောင်းရဲစခန်းအရှေ့၊ Happy Zone အနီး အလှပြထားတဲ့ ခဲရောင်လေယာဉ်ကြီး ၂စီးနောက်က ဆိုင်ပါနော်။ ကားရပ်စရာနေရာတွေရှိပါတယ်။ ခုချိန်ထိတော့ နေ့လည်ခင်းတွေ ၁၂ လောက်ထိ လူနည်းတုန်းပဲ။
၆၀၀၀ တန်ဘူဖေး တန်၊ မတန်၊ဂျင်း၊ မဂျင်း၊ ချိန်ဆနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ Hot Pot ၊ BBQ မဟုတ်ဘဲ ထမင်း အကြော်အလှော်နဲ့ ဟင်းပွဲတွေမို့ စားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ တန်မှာပါလို့ အခရာမှ စားသောက်ခဲ့သမျှအထွေထွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။
ဟငျးပှဲ ၃၀ ကြျော နဲ့ ၆၀၀၀ တနျ Thai Taste Buffet ဂငျြး၊ မဂငျြးအနအေထား
Thai Taste ဆိုတာက ရနျကုနျမွို့ရဲ့ ထိုငျးစားသောကျဆိုငျတှထေဲမှာ နာမညျတဈခုရထားပွီးသားဖွဈသလို ခုလညျး သုဝဏ်ဏဆိုငျအပွငျ ပွညျသူ့ရငျပွငျ Happy Zone ထဲမှာပါ ဆိုငျခှဲတဈဆိုငျ ထပျဖှငျ့ထားတယျဆိုပဲ။
ဒီအထိက မထူးဆနျးသေးပမေယျ့ ခု နလေ့ညျစာ ဟငျးပှဲ ၃၀ နဲ့ ၂ နာရီစာဘူဖေးထမငျးဟငျး အဝစားကို ၆၀၀၀ ကပျြ၊ ညစာဆို ၉၀၀၀ ကပျြဆိုပွီး တနျတနျကွီး ခငျးကငျြးနတေယျဆိုတော့ ထိုငျးစာရော၊ ထမငျးဟငျးဝဝစားခငျြတဲ့သူတှအေတှကျပါ အခွေအနေ အနအေထားဘာညာ တနျ၊ မတနျ၊ ဂငျြး၊ မဂငျြး သိခငျြနတေဲ့သူတှအေတှကျ အခရာကနေ သှားရောကျ စားသောကျကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ….
မှတျမိကွမလားမသိဘူး။ ငယျငယျတုနျးက ကြောငျးမုနျ့ဈေးတနျးတို့ ကနျတငျးတို့က စားသောကျခနျးမကွီးတှမှော ထမငျးစားရသလိုပဲ။ ဆိုငျက အခနျးကယျြကွီးကို စားပှဲခုံတှနေဲ့ ကနျြတာ ဘာမှမပွငျဆငျရသေးတာလား၊ မပွငျထားတာလားတော့ မသခြောပါဘူး။
ခုမှဖှငျ့ကာစဆိုတော့ ဆိုငျးဘုတျတောငျ ဒီနမှေ့စတပျနကွေတာ မွငျခဲ့ရတယျ။ ထောငျ့စှနျးမှာ ဗနျးကွီးတှနေဲ့ ဟငျးပှဲတှေ တနျးစီထားတယျ။ ဒီလောကျပါပဲ။ သနျ့ရှငျးမှုကတော့ စိတျခရြပါတယျ။
ဝနျဆောငျမှုကောငျးတယျ။ ဝနျထမျးလေးတှကေ သခြောရှငျးပွတယျ။ ဘေးက လိုတာလိုကျသယျပေးတယျ။ သဘောကစြရာပါပဲ။
ကွကျသား ခြိုခဉျြ၊ ခဉျြစပျ၊ မြှဈခဉျြ အပါအဝငျ ကွကျ ၄,၅ မြိုး၊ ငါး ခြိုခဉျြ၊ ခဉျြစပျအပါအဝငျ ၃,၄ မြိုး၊ ကငျးမှနျအုနျးနို့၊ ကငျးမှနျကွျော၊ ပုစှနျထုပျခကျြ တှကေ တဈပိုငျး။
တုနျယမျးဟငျးခြို၊ ဝကျခဉျြစပျ၊ ကွာဆံကွျော၊ ခေါကျဆှဲကွျော၊ ဖကျထိုငျးကွျော၊ အသီးအရှကျ၊ သီးစုံကွျောတှေ၊ သဘောင်္သီးထောငျးတှနေဲ့ မာလာရှမျးကော အဝစားလညျးပါတယျ။
ဖကျထုပျကွျော၊ တနျပူရာကွျော၊ ကျောပွနျ့ကွျော၊ အအေး၊ ရသေနျ့၊ ဖရဲသီး၊ အုနျးနို့သာကူ အဲ့လောကျထိ စုစုပေါငျး အမြိုး ၃၀ ရတယျ။ တုနျယမျးက ပုစှနျထုပျတှနေဲ့ ခကျြထားတာ အရသာတော့ပေါ့တယျ။ ပုစှနျခကျြဟငျးပှဲကတော့ ပှဲအလိုကျခပြေးပါတယျ။
ဆော့ဈ ၄ မြိုးလောကျရှိတယျ။ ငါးပိခကျြ၊ တို့စရာလညျး ရှိတယျ။ စုံလားမေးရငျ အရှကျနဲ့ ကွကျသားမြားတယျ။ ထမငျးကို ဟငျးနဲ့အဝစားတတျတဲ့သူတှေ၊ ထိုငျးစာကွိုကျတဲ့သူတှေ၊ နလေ့ညျစာဗိုကျအတငျးအကား စားတတျတဲ့သူတှအေတှကျဆိုတနျမယျထငျရတာပါပဲ။
အဆငျမပွတောကတော့ ပူပူနှေးနှေးလေး အောကျကမီးအပူမပေးထားတာရယျ၊ တခြို့ဟငျးပှဲတှကေအရသာသိပျမပွသေေးတာရယျ၊ အရှကျမြားတာရယျလောကျတော့ ရှိတယျ။
မာလာရှမျးကောအရသာလေးတော့ မဆိုးဘူး ပွောရမယျ။ တျောတျော အစပျအဟပျတညျ့တယျ ခံစားရတယျ။ ဒီဆိုငျမှာ အစားမြားတဲ့ထဲပါတယျတဲ့။ အသားလုံးတှေ၊ ခေါကျဆှဲတှမေပါဘဲ အသားနဲ့ပဲ ခကျြထားတာပမေယျ့ အရသာရှိတာတှရေ့တယျ။ မာလာရှမျးကောကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျတော့ ဒီမှာ ၂နာရီစာ အဝစားရုံနဲ့တငျ တနျပွီထငျတာပဲ။
ပုစှနျထုပျတှနေဲ့ အသား၊ ငါးတှပေါတာပဲ အဆငျပွတေယျလို့ ခံစားရပါပွီ။ ကဏနျးကတော့ ညနေ ၉၀၀၀ တနျ ဘူဖေးစနဈမှာမှပါတာပါတဲ့။
နလေ့ညျခငျးစားခြိနျဆို ၁၀:၀၀ ကနေ ၃:၃၀ အထိ ၆၀၀၀ ကပျြကှကျတိနဲ့ ညနေ ၄ နာရီကနေ ည ၁၀:၃၀ ထိကိုတော့ ၉၀၀၀ ကပျြကမြှာပါတဲ့။
လိပျစာက မွနေီကုနျး၊ ပွညျသူ့ရငျပွငျ၊ ဓမ်မစတေီလမျးအပေါကျ၊ စမျးခြောငျးရဲစခနျးအရှေ့၊ Happy Zone အနီး အလှပွထားတဲ့ ခဲရောငျလယောဉျကွီး ၂စီးနောကျက ဆိုငျပါနျော။ ကားရပျစရာနရောတှရှေိပါတယျ။ ခုခြိနျထိတော့ နလေ့ညျခငျးတှေ ၁၂ လောကျထိ လူနညျးတုနျးပဲ။
၆၀၀၀ တနျဘူဖေး တနျ၊ မတနျ၊ဂငျြး၊ မဂငျြး၊ ခြိနျဆနတေဲ့သူတှအေတှကျတော့ Hot Pot ၊ BBQ မဟုတျဘဲ ထမငျး အကွျောအလှျောနဲ့ ဟငျးပှဲတှမေို့ စားနိုငျတဲ့သူတှအေတှကျတော့ တနျမှာပါလို့ အခရာမှ စားသောကျခဲ့သမြှအထှထှေတေငျပေးလိုကျပါတယျရှငျ့။